Oppo R2001 Dead In Vibrate Only Fix By MIn Oke Kar - MPPG
Home / Uncategorised / Oppo R2001 Dead In Vibrate Only Fix By MIn Oke Kar
Oppo R2001 Dead In Vibrate Only Fix By MIn Oke Kar
minokekar May 14, 2016	Uncategorised 11,300 Views
Oppo ဖုန်းတော်တော်များများ အဖြစ်များတဲ့
Firmware တင်ပီးရင် Vibrate ပဲ တုန်ုတုန် သွားကြပါတယ်.
ခုလည်း ကျနော် 2001 တစ်လုံး Firmware တင်ပီးတာနဲ့
တုန်ပဲ တုန်နေတော့ ခေါင်းခဲပါလေရော.
အာ့နဲ့ Online ပေါ်ကနေ Firmware တွေ ရှာဒေါင်းပီး တစ်ခုပီးတစ်ခု
တစ်ခု တင်ကြည့်တယ် အာ့နဲ့ အဆင်ပြေသွားလို့ Vibrate Fix ပဲ ထုတ်ပီး တင်ပေးလိုက်တယ်.
စမ်းကြည့်ပေါ့ အလုံးတိုင်း ရမယ်လို့ လည်း အာမ မခံဘူးနော်.
Download Oppo R2001 MT6582 Vibrate Only Fix (11.0) MB
Rar Passs >>>> www.minokekar.net
Previous Facebook မှာ ကိုယ့် Post ကို ဘယ်သူ Like လုပ်နေလဲ ဘယ်သူက တစ်ခါမှ မလုပ်လဲ သိချင်လား . ဒါလေး ဒေါင်းလိုက်
Next SYH WP 800 Display Error Fix (2) File By Min Oke Kar